Uhtred ၏ပျောက်ဆုံးနေသောသားဖြစ်သူနောက်ဆုံး The Last Kingdom ရာသီ ၄ တွင်ရှင်းပြသည် - နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်
နောက်ဆုံးဘုရားသခင့ရာသီ4ရက်နေ့တွင် Uhtred ၏ပျောက်ဆုံးနေသောသားကရှင်းပြသည်
Star Wars - Clone Wars သည် Disney Plus အားနှုတ်ဆက်သည် Extraction2သည် Netflix ရှိအလုပ်များတွင်တရားဝင်ဖြစ်သည်
သငျသညျနောက်ဆုံးဘုရားသခငျ့ရာသီ4ရက်နေ့တွင် Uhtred ၏တတိယသားအကြောင်းကိုစဉ်းစားလျှင်သင်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါဘူး, ယခုသူ၏ပျောက်ဆုံးမှုကိုတရားဝင်ရှင်းပြထားသည်။
သငျသညျငါကဲ့သို့သောဘာမှမဖြစ်လျှင်, သင်တစ်ခုလုံးကိုသုံးစွဲခဲ့သည် နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော် Uhtred ရဲ့တတိယသားရှိရာဘယ်မှာအံ့သြရာသီ4။ ရှင်းလင်းချက်အရ၎င်းသည်သူသည် Gisela နှင့်တတိယမြောက်ကလေးဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းတတိယမြောက်သားဖြစ်သည် (ပထမရာသီတွင် Mildreth နှင့်အတူရှိခဲ့သည်) ကလေးသူငယ်သည်ဝတ္ထုများတွင်ရှိနေသေးသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားကြပြီးဖြစ်သည်။
သူကတစ်ချိန်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့မခံခဲ့ရပါဘူး။ Hild က Uhtred ကိုသူ့ကလေးများဘယ်လိုနေသလဲလို့မေးရင်တောင်သူကသူ့သားကြီး Young Uhtred နဲ့သူ့သမီး Stiorra အကြောင်းပြောတယ်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးစီးရီးတစ်လျှောက်လုံးပေါ်လာကတည်းကသူတို့နှစ် ဦး စလုံးဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့ကြသည်။ ဒါပေမယ့်တတိယမြောက်ကလေးကျန်နေသေးတယ်ဆိုတာတောင်သူတစ်ခါမှမရိပ်မိခဲ့ဘူး။
နှင့်အင်တာဗျူးတွင် ရေဒီယို Times အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ Nigel Marchant မှပျောက်ဆုံးနေသောကလေး၏ခေါင်းစဉ်ကိုဖော်ပြသည်။ သူကတစ်နေရာရာမှာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေသေးပေမယ့် ၁၀ ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့သာသူ့ကိုပြဖို့အချိန်မရှိဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Uhtred မှကလေးနှစ်ယောက်ရှိရုံမကအက်ဒွပ်၏ကလေးနှစ်ယောက်နှင့်အခြားဇာတ်ကောင်အသစ်များလည်းပါ ၀ င်သည်။
ပင်ဖော်ပြချက်မရှိခဲ့ကြောင်းမှလွဲ။ ကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်ယူကြလိမ့်မယ်အားလုံး Hild မှတစ် ဦး အမြန်ဖော်ပြထားခြင်းသောအခါဤအငြင်းအခုံမခံမရပ်ပါဘူး။ Stiorra သည် Aethelflaed ၏သမီးနှင့်အတူဖြစ်ပြီး Young Uhtred သည်ဘုရားကျောင်းအတွင်းဘဝကိုအောက်ပါဖြစ်သည်။ ကလေးများအကြောင်းအလျင်အမြန်ဖော်ပြထားခြင်းအရတတိယမြောက်အသက်ရှင်နေသည့်ကလေးငယ်သည်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေကြောင်းဖော်ပြချက်တစ်ခုသာလုံလောက်ပေလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ငါတတိယသားပါဝင်ပတ်သက်ရှိသည်ဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်မရှိခဲ့ကြောင်းလက်ခံခဲ့သည်နိုင်ဘူး။
ကလေးသည်ကျွန်ုပ်ပျောက်ဆုံးနေသည့်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါ။ တတိယရာသီ၌သူ၏ဇနီးနှင့်သားကိုဤမျှလောက်အာရုံစိုက်ပြီးသောအခါ Sihtric ကသူမကိုစတုတ္ထမြောက်တစ်လျှောက်လုံးသူမဖော်ပြခဲ့ဟုကျွန်တော်ခံစားမိသည်။ သူတို့ထွက်သွားခဲ့တာလား ဒါမှမဟုတ်သူတို့တစ်နေရာရာ၌ရှိကြ၏ နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော် Uhtred ၏သားနှင့်အတူရာသီ4ပျက်ပြယ်?
အခုတော့မျှော်လင့်, ပြပွဲပဉ္စမရာသီရရှိသွားတဲ့။ Uhtred နှင့် Sihtric တို့အတွက်အရေးကြီးသောဤဇာတ်ကောင်များကိုလျှင်မြန်စွာဖော်ပြခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့လိုင်းတစ်ခုကအားလုံးကောင်းသွားမှာပါ။
ပျောက်နေတဲ့သားအတွက်ရှင်းပြချက်ကိုခင်ဗျားဘယ်လိုထင်သလဲ နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော် ရာသီ4? အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များတွင်သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုမျှဝေပါ။
နောက်တစ်ခု:နောက်ဆုံးမေးခွန်း ၅ ခုအတွက်မေးခွန်း ၁၀ ခု
အဆိုပါ flash ကိုထွက်လာကြပါဘူးသည့်အခါ
တောင်ပိုင်း usa သွန်း၏မိဖုရား
Netflix အပေါ်ဖြစ် superstore ပါလိမ့်မယ်
ဂျွန် krasinski နှင့် jenna fischer နေ့စွဲကိုပြု၏